October 30, 2019 - Myitter
ဘုရား ဖူးအပြန် ရွာငံမှာ ကားချောက်ထဲကျ မူ မသေခင် ရိုတ်ထားကြပုံတွေပါ
October 30, 2019 Myitter 0
ဒီလူတွေ သေမှာဆို ဘယ်သူယုံ မလဲဗျာကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ကြပါစေ ဘုရား ဖူးအပြန် ရွာငံမှာ ကားချောက်ထဲကျ လို့ ဆုံးပါးသွားကြတာ မသေခင် ရိုတ်ထားကြပုံလေးတွေပါ.။😥😰😭 ဖြစ်စဉ်မှာ 29.10.2019 #ပေ ၂၀၀၀​ ကျော် နက်တဲ့ ဂျောက်ထဲကျတာ ၁၉ဦးသေဆုံး ၇ဦးဒဏ်ရာ ရ 28-10-2019နေ့ ညပိုင်းမှာ ရွာငံမြို့ယုန်တောင်ကျေးရွာတွင်ဘုရားဖူးLight […]
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညပြီး နောက်နေ့ နေ့လည်ထိ မထွက်နိုင်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ
ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မချောဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘ၀ရောက်ကြပါတယ် …။ နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်တော်တော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ …။ ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး …။ ကိုမောင်ကောင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ် …။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကောင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ မောင်ရွှေအေးဟာ ကျောင်းသွားခါနီး အမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို […]
မူးယစ်ဆေးဝါးလည်းသုံးထားတယ်။ ကြိုတင်ကြံစည်မှုလည်းသိသာနေတယ်။ သေစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို တချက်တည်းမဟုတ် ၆ချက်တိတိဓားနဲ့ထိုးသွင်းပြီး ကျွန်တော့်ညီမလေးကို သတ်သွားတဲ့ လူတယောက်လို့မခေါ်ထိုက်တဲ့သက်ရှိဝတ္တုတခုအတွက် ကျေအေးခြင်းကလုံးဝမရှိပါဘူး။ ဘာသာတရားအဆုံးအမတွေက ခွင့်လွှတ်ဖို့၊ သည်းခံဖို့၊ အချင်းချင်းချစ်ကြဖို့သွန်သင်နေပေမယ့် ဒီအမှုကိုနောက်ဆုတ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော် သူတော်စင်တပါးမဟုတ်ဘူး။ ဒီအရာဝတ္တုကိုလွှတ်ပေးလိုက်လို့ ကျွန်တော့်ညီမလေးလို နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ယောက်ထပ်ပြီးစတေးခံရမလဲ။ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်စေရပါဘူးလို့ အာမခံနိုင်တဲ့သူကလည်း ရွာသာကြီး(စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ) ကအတွင်းလူနာတယောက်ပဲဖြစ်မှာ တထစ်ချယုံကြည်တယ်။ […]
၂၉.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၂ ၁၁.၂၀၁၉ရက်နေ့အထိ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း….
အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း ဖြစ်ပါတယ်(၇) နေ့ဖွားသားသမီးများအတွက် ဆယ့်ငါးရက်စာ ဟောစာတမ်းများကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဖြစ်မည် အရောင်းအဝယ်ပါးပြီး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ အကြပ်အတည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမည် ဝင်ငွေထွက်ငွေ ကြမ်းမည် ငွေကြေး ကြပ်တည်းမည်။ […]
အာမခံလျော်ကြေးငွေ 300,000 ဘတ်လက်ခံရန် သေဆုံးသူမြန်မာလူငယ်ရဲ့ မိဘကိုလိုက်ရှာ
Zawgyi ကျေးဇူးပြုပြီး Share ပေးလိုက်ပါ။ အာမခံလျော်ကြေးငွေ 300,000 ဘတ်လက်ခံရန် သေဆုံးသူမြန်မာလူငယ်ရဲ့ မိဘကိုလိုက်ရှာ လွန်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ 22 ရက်နေ့က ณธษา บรรจงวงศ์ အမည်ရှိ ဖေ့ဖ်ဘုတ်အသုံးပြုသူမှ သေဆုံးသူမြန်မာလူငယ် Mr. Venmoekyaw (นายเวนโมจอ) အသက် 23 နှစ်ရဲ့မိဘကို ဖေ့ဖ်ဘုတ်ပေါ်တင်ပြီး […]
ဝန်ကြီးများရုံးမှာ အနှိပ်ခန်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်ကအရှုပ်တော်ပုံ
ယနေ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ဝေဖန်မှု အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဝန်ကြီးများရုံးမှာ အနှိပ်ခန်း တည်ဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲနေတာလေးတွေ နဲနဲဝင်တည့်ပေးပါ့မယ်။ ဒီအကြောင်းကို မပြောခင် သမိုင်းဝင် ဝန်ကြီးများရုံးရဲ့ သမိုင်းကို အနည်းငယ် ပြောပါရစေ။ ဝန်ကြီးများရုံးကို ကိုလိုနီခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ် အစိုးရကမြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ၁၈၈၆ ခုနှစ်မှာ သိမ်းယူအပြီးများပြားလာတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအတွက် ယခင်ကအသုံးပြုနေတဲ့ […]
မုန်လာဥနီဖျော်ရည်ကို ၈လ ဆက်တိုက်သောက်ပြီးနောက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ မယုံနိုင်စရာအဖြစ်ပျက်
ကလေးစာပေတွေကို ရေးသားတဲ့ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမ Mrs Ann Cameron ကတော့ သူမရဲ့ အံသြစရာ အတွေ့အကြုံကို ဝေမျှ ခဲ့ပါတယ်။ သူမ ဘဝမှာ ပထမဆုံးခါးသီးစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ရောဂါကတော့ ဓာတုကုထုံး နဲ့ ကုသမှူ ခံယူရင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ […]
ဒီနေ့ ၃၀ ရက် မနက် ၃ နာရီ မုန်တိုင်း ခန့် မှန်းချက်
ဒီနေ့ ၃၀ ရက် မနက် ၃ နာရီ မုန်တိုင်း ခန့် မှန်းချက် – ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပေါ်ဘို့ ရှိတဲ့ မုန်တိုင်း BulBul ဘူးဘူးနိုဝင်္ဘာ ၇ ရက်နေ့ မှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်မည် ၊ ဒီနေ့မနက် ၃ […]
ဗီရာ နဲ့ပွဲ မှာ ထိခိုက်မိသွားသော လက်မအား ပြန်လည်ကုသလို့ပြီးသွားပါပြီ ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်….
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စိန်ခေါ်သူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားနှင့် ထိုးသတ်သောပြိုင်ပွဲတွင် ထိခိုက်မိသွားသော လက်မအား နေသားသကျဖြစ်အောင်ပြန်လည်ကုသလို့ပြီးသွားပါပြီ။ အခုတော့နဂိုအတိုင်း ပြန်ပြီးအရင်လိုလုပ်စရာရှိတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ဖိုက်တာကြီး အောင်လအန်ဆန် Myanmar_Online_News #Aung_La_Nsang #Burmese_Python <zawgyi> ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စိန်ခေါ်သူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားနှင့် ထိုးသတ်သောပြိုင်ပွဲတွင် ထိခိုက်မိသွားသော လက်မအား နေသားသကျဖြစ်အောင်ပြန်လည်ကုသလို့ပြီးသွားပါပြီ။ အခုတော့နဂိုအတိုင်း […]
သေဆုံးအလောင်းများအား ရွှေဘိုမြို့နယ်သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်
သေဆုံးအလောင်းများအား ရွှေဘိုမြို့နယ်သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရွာငံမြို့နယ်၊ ယုံတောင်အဆင်းတွင် အောက်တိုဘာ (၂၈)ရက် ညနေ (၆)နာရီခွဲခန့်က ဘုရားဖူးယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်ခဲ့သည့်အတွက် (၁၉)ဦးသေဆုံးခဲ့ရာ အလောင်းများအား ရွာငံမြို့နယ် ဆေးရုံကြီးမှတဆင့် ရွှေဘိုမြို့နယ် ခွန်တောင်းကြီးကျေးရွာသို့ ပြန်လည်သယ်ယူခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ Nay Thurain. အရေးကြီးပါ၍ ရွှေဘို ခွန်တောင်းကြီး […]
မန္တလေး ကန်တော်နဒီဆေးရုံမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်လူနာ သေဆုံး …..